नै मा स्विट्जरल्याण्ड उत्तम अनुभवहरू के हुन् | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप > नै मा स्विट्जरल्याण्ड उत्तम अनुभवहरू के हुन्
नै मा स्विट्जरल्याण्ड उत्तम अनुभवहरू के हुन्
द्वारा कारोलिना क्लेस्टा
ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, यात्रा युरोप
आह, स्विट्जरल्याण्ड, एक सुन्दर र शान्तिमय देशको बीचमा आरामसँग बसिरहेको छ इटाली, फ्रान्स, र जर्मनी. स्विजरल्याण्डलाई निरन्तर रूपमा संसारकै सबैभन्दा सुखी देशमध्ये एकको रूपमा मूल्या is्कन किन गरियो भनेर हेर्नको लागि यो एउटा भ्रमणको योग्य छ. त्यसैले तपाईं के गर्दा तपाईंलाई लाग्छ कि को लाग्छ 'स्विट्जरल्याण्ड '? म अनुमान छु हिउँले ढाकिएको चुचुराहरू, पनीर, र चकलेट. त्यहाँ चकलेट लागि समय प्रशस्त हुनेछ र Fondue तपाईंको स्विस मा vacay, तर सांस्कृतिक सबै समावेश गर्न निश्चित, प्राकृतिक, र ऐतिहासिक विशेषताहरू यो देश प्रस्ताव छ. महाकाव्य रेल सवारी र डाँडाबाट चिबुक-गिर वास्तुकला गर्न पदयात्राहरू, स्विट्जरल्याण्ड हरेक मौसममा यात्री हरेक प्रकार प्रदान गर्न केहि छ. का लागि अवश्य विचाराधिनगर्नुपर्नेकार्य केही तल तोड गरौं आफ्नो स्विट्जरल्याण्ड यात्रा.
रेल यात्रा यो सानो देश हेर्न एउटा अचम्मको तरिका हो. एक कार भाडामा लिने र सडक ट्रिपिंग धेरै देशहरूमा परिवहन को एक बेहतर फारम हुन सक्छ, तर रेल द्वारा यात्रा स्विट्जरल्याण्ड मा एक प्रतिष्ठित अनुभव छ! यो रेल सफा छन्, समयमा, र सबै भन्दा केही मार्फत यात्रा मनोरम दृश्यहरु संसारमा. यसबाहेक, रेल मार्गहरू केही अझै पनि धेरै राम्रो-संरक्षित छ, तपाईं जस्तै महसुस गर्नेछ ऐतिहासिक रेल कार पुरानो चलचित्र हो! सबै भन्दा प्रसिद्ध मार्गहरू केही Jungfraujoch समावेश, को GoldenPass रेखा, र हिमनदी एक्सप्रेस. यी मार्गहरू केही समावेश छन् Eurail पास, र छैन भनेर केही Eurail पास धारकहरुलाई छूट प्रदान गर्नेछ. स्विट्जरल्याण्ड मा गाडिहरु सधैं सस्तो हो, त्यसैले एक सानो अग्रिम योजना तपाईंले केही फ्र्याङ्क सुरक्षित मदत गर्न सक्छ, तपाईं कि क्रस-देश यात्रा वा एक लिइरहेको दिन यात्रा!
ट्रेन द्वारा इंटरलकेनमा बासेल
बर्न बाट Interlaken ट्रेन द्वारा
लुसेर्न बाट Interlaken ट्रेन द्वारा
ट्रेन द्वारा ज्यूरिख
स्विस आल्प्स सबैभन्दा प्रतिष्ठित एक हो जाडो खेल गन्तव्यहरू संसारमा. को ढलान दिन लाग्छ, र रात चिया को न्यानो कप र cheesy सूप को एक हट कचौरा साथ घुमाउरो. तपाईं न्यानो जलवायु छन् र अघि skied कहिल्यै छ भने, यो जस्तै जाडो यात्राको बस तपाईं चलचित्र मा देख्न कुरा जस्तै लाग्न सक्छ. तपाईं आफ्नो जीवन कुनै पनि बेला स्की गर्न सिक्न सक्छौं र स्विट्जरल्याण्ड को प्रशस्त छ रिसोर्ट्स छन् शुरुआतीहरूको लागि उत्तम, स्की पाठ र खरायो पहाड संग. धेरै रिसोर्ट्स पनि लागि पाठ प्रस्ताव बच्चाहरु, स्विट्जरल्याण्ड एक बनाउने स्की यात्राहरूमा जान परिवारको लागि ठूलो ठाउँ!
ज्यूरिखदेखि सेन्ट मोरित्ज ट्रेन टिकटहरू
Zermatt सेन्ट मोरित्ज ट्रेन टिकटहरु
लियोन सेन्ट मोरित्ज ट्रेन टिकटहरू
बसेल सेन्ट मोरित्ज ट्रेन टिकटहरू
गुफाहरु छन् छैन म त जब म स्विट्जरल्याण्ड मेरो यात्रा योजना को लाग्यो पहिलो कुरा. तथापि, स्विट्जरल्याण्ड भ्रमण गर्न धेरै सुन्दर र चाखलाग्दा गुफाहरु छ, विशेष गरी न्यानो गर्मी महिनामा.
ज्यूरिखदेखि जर्मेट ट्रेनको समय
जिनेभा देखि Zermatt ट्रेन समय
बर्न देखि Zermatt ट्रेन समय
लुसेर्न देखि Zermatt ट्रेन समय
यो ठूलो गुफा छ एक ताल र भोज हल भित्र कि वास्तवमा बारेमा समायोजित गर्न सक्छन् 400 मान्छे र यस्तो बुफे डिनर रूपमा घटनाहरू लागि बाहिर भाडामा हुन, दलहरू, र विवाह. घटनाहरू त्यहाँ डीजे सुविधा, डान्सरहरू, र संगीतकार. तपाईं एक अद्वितीय गन्तव्यमा Vitznau देखि एक ऐतिहासिक रेल लाग्न सक्छ. आफ्नो वेबसाइट मात्र जर्मन छ, तर तपाई अधिक यात्रा जानकारी को लागी कुनै विदेशी भाषा वेबसाइटहरु लाई जाँच गर्न गुगल क्रोम को उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ - तपाई स्वत: अनुवाद खोल्न सक्नुहुन्छ!
सेन्ट. खुसी खबरदार
को सेन्ट. Beatus गुफा तल देश मा सबै भन्दा प्रभावशाली गुफा प्रणाली को एक हात छ. पहिलो खुला हप्ता को मार्च अक्टोबर को पहिलो हप्ता गर्न, यो व्यक्तिहरूलाई वा समूहहरू पश्चिमी भ्रमण को लागि एक सिद्ध गन्तव्य हो वर्ष को न्यानो महिनामा स्विट्जरल्याण्ड. तपाईं एक्लै गुफा खोजी गर्न सक्छ, वा निर्देशित को एक मा सामेल पर्यटन कि दिन भर नियमित हुन. कुकुर साथै गुफा तपाईं सामेल स्वागत छ, तर तपाईंले तिनीहरूलाई लागि प्रवेश टिकट किन्न आवश्यक हुनेछ! प्रवेश मूल्य समावेश (मात्र मानिसहरूलाई, माफ गर्नुहोस्) को सेन्ट Beatus गुफा संग्रहालय गर्न भर्ना छ, जो तपाईं इतिहास सिकाउन हुनेछ, लोकगीत, र गुफा सिस्टम को भू-!
Titlis ग्लेशियर गुफा
यो एक जाडो महिनाको लागि छ. हिमनदी गुफाहरु, पनि बरफ गुफाहरु रूपमा ज्ञात, शायद यो सुलभ छन्. पुरातन बरफ बनाइएका यो otherworldy गुफा एउटा यात्रा हो कसैको लागि अवश्य Engelberg नजिकै स्कीइंग. आफ्नो न्यानो जाडो लुगा मा बन्डल र बरफ देखि सम्पूर्ण गरेको गुफा गरेको नीलो-hued गलियारों मार्फत traipse!
भ्रमण एक प्रकार संग्रहालय एक
हरेक प्रमुख सहर छ एक इतिहास वा विज्ञान संग्रहालयको लागि भयानक छ शहर ब्रेक र बरसातका दिनहरू. तथापि, केही गन्तव्यहरू साँच्चै छ अद्वितीय संग्रहालयहरु बस छैन छुटेका पर्छ भनेर. मानिसहरू H.R भ्रमण गर्न दुनिया भर सबै आउन. Gruyère मा Geiger संग्रहालय.
H.R. Geiger राम्रो आफ्नो macabre र भविष्य कलाकृति लागि संसारभरिका ज्ञात छ कि एक प्रसिद्ध स्विस कलाकार छ. तपाईं चलचित्र विदेशी मा प्राणीहरू जो सिर्जना कलाकार तिनलाई थाहा हुन सक्छ. तपाईं अनौठो चाहनुहुन्छ भने, विचित्र कला को Geiger संग्रहालय डुबाउनुहोस् र Geiger थिम्ड पट्टी अर्को पसलमा ककटेल यसलाई फलो. आफ्नो कला परिचित छैन? तपाईं जान अघि संग्रहालय को भर्चुअल भ्रमण.
लियोनबाट जिनेभा ट्रेन समय
ज्यूरिखदेखि जिनेभा ट्रेन समय
पेरिस देखि जिनेभा ट्रेन समय
लुसेर्न देखि जिनेभा ट्रेन समय
फोन्डु को घर मा Indulge
फोन्डु छ सबै भन्दा प्रसिद्ध व्यञ्जन एक स्विट्जरल्याण्ड बाहिर आउन, र यो कुनै दुर्घटना छ. मान्छे स्विट्जरल्याण्ड को पश्चिमी फ्रान्सेली भाषा बोल्ने भाग मा वर्ष सयौं लागि एक कम्युनल पट देखि पग्लियो पनीर खाने गरिएको छ. तथापि, 1930 मा स्विस पनीर संघ आक्रामक यो पकवान दुवै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रीय marketed, यसलाई स्विजरल्याण्डको राष्ट्रिय पकवानको रूपमा घोषणा गर्दै देशको अत्यधिक बेच्ने माध्यमको रूपमा पनीर. र हामी खुसी तिनीहरूले गरे हो, जो मन छैन पग्लियो पनीर र रोटी? सुक्खा आफ्नो Fondue जोडी सेतो रक्सी, र निश्चित गर्नुहोस् डबल डुब्नको लागि!
ज्युरिख ट्रेनको समय बाटल
जेनेभा ट्रेन समय बासेल
इन्टरल्याक्ड ट्रेन समयहरूमा बेसल
बसेलदेखि बर्न ट्रेन समय
नबिर्सनुहोस् चकलेट बारे
यो लागि समय वास्तविक कारण तपाईं स्विजरल्याण्ड जाँदै हुनुहुन्छ – मिठाई! स्विट्जरल्याण्ड एकदम यसको चकलेट लागि प्रसिद्ध छ, र तपाई देशको चारै तिर सडक कुनामा धेरै लक्जरी चकलेटरीहरू पाउन सक्नुहुन्छ, तथापि, ज्यूरिख यसको धेरै चकलेट भ्रमणका लागि प्रसिद्ध छ. त्यहाँ एक चकलेट यात्रा छ प्रत्येक बजेट फिट! तपाईं शनिवार लिन सक्नुहुन्छ बिहानको पैदल यात्रा जसले सहरका हाइलाइटहरूलाई शहरका केही उत्तम चकलेटहरूको साथ जोड्दछ. तपाईं एउटा सानो चकलेट कारखाना भ्रमण प्रयास सक्छ, र अनुभव तपाईंको आफ्नै बनाउन चकलेट बार. साँच्चै शानदार गर्मी गतिविधिको लागि, एक चकलेट लिन डुङ्गाबाट भ्रमण गर्न Lindt र Sprungli कारखाना.
ज्यूरिख ट्रेनको समयसँग मिल्दोजुल्दो
लुसेर्नबाट ज्युरि ट्रेनको समय
बर्नदेखि ज्यूरिख ट्रेन समय
जिनेभादेखि ज्युरि ट्रेनको समय
युरोप को शीर्ष जाने
ठिक छ, अब तपाईं र चकलेट र पनीर अप भरिएको छ कि, यसलाई फेरि बढ प्राप्त गर्न समय छ! स्विस पहाड बस जाडो स्किइङ लागि छैन! छन् मनोरम गर्मी hikes तपाईं देश वरिपरि सबै मा जान, तर Jungfrau क्षेत्र आफ्नो बाल्टिन सूची मा उच्च अप हुनुपर्छ. को Jungfraujoch मा युरोप मा उच्चतम बिन्दु हो 3,454 मीटर (~ 11.330 खुट्टा) र दृश्य छैन छुटेका गर्नुपर्छ. त्यहाँ एक रेलवे छ जुन त्यहाँ तपाइँलाई बर्ष लाग्नेछ यदि तपाइँ एक ठूलो पैदल यात्री हुनुहुन्न भने, वा तपाईंले जाडो समयमा भ्रमण. तपाईं एउटा चुनौती अप छन् भने यी मार्गहरू केही जाँच क्षेत्र. मार्गहरू धेरै बाटो साथ राम्रो खाना र पेय प्रतिष्ठानबाट छ, त्यसैले चिन्ता छैन, तपाईं कुनै न कुनै यो आवश्यक छैन!
तपाईं स्विट्जरल्याण्ड मा कुनै पनि मनपर्ने स्थानहरू छन्? हामीलाई थाहा दिनुहोस् र नबिर्सनुहोस्, सबै भन्दा राम्रो वेबसाइट अर्डर टिकट गाडिहरु बचत एक ट्रेन छ
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र केवल एउटा लिङ्क हामीलाई एक क्रेडिट दिन यो ब्लग पोस्ट गर्न, वा यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-experiences-switzerland-winter-summer%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/zh-CN_routes_sitemap.xml र तपाईं / ja वा / र अधिक भाषा परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ / zh-CN.
#suisse #swisstrip यातायात स्विट्जरल्याण्ड
म मेरो पति Patryk र छोरी मिया संग संसार भ्रमण गर्दैछु. मेरो मुख्य लक्ष्य अरूलाई पूर्ण रूपमा उनीहरूको जीवनको लागि प्रेरित गर्न र उनीहरूको सपनाको पीछा गर्न कहिल्यै रोक्नु हो! - तपाईं यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ मलाई सम्पर्क गर्नुस्
के हो सबै भन्दा राम्रो पुस्तक पसलहरु मा युरोप
ट्रेन यात्रा बेल्जियम, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा इटाली, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, यात्रा युरोप
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा ब्रिटेन, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, ट्रेन यात्रा यूके, यात्रा युरोप